‘प्रेमगीत २’ को दुई दिन बम्पर ओपनिङ
कहिले एकपछि अर्को फिल्मलाई दर्शक अभाव त कहिले दर्शकले टिकट समेत पाएनन् । यी र यस्ता खबरहरुले बेलाबखतमा सिनेवृतमा छुट्टै तरंग उत्पन्न गर्ने गर्छ । गएको वर्ष झण्डै ८० फिल्म रिलिज भए तर नाफासहित आधा दर्जनले पनि पैसा खल्तीमा हाल्न सकेनन् । यस वर्षपनि अझै दर्जन बढी फिल्म रिलिज भैसकेका छन् तर बैशाखदेखि साउनसम्म आइपुग्दा २ फिल्मभन्दा बाहेक अरुले लगानी ...
साउन, १४।, बलिउड अभिनेता इन्द्रकुमारको ४४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । सलमान खान, सञ्जय दत्तजस्ता चर्चित हिरोका साथ अभिनय गरिसकेका इन्द्रको हृदयाघातका कारण बिहीबार राति मुम्बईस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । इन्द्रकुमारको जिन्दगी कन्ट्रोभर्सीले भरिएको छ । झन्डै एक दशक अभिनेत्री ईशा कोप्पीकरसँग लिभ इन रिलेसनमा रहेक...
टिन प्रिन्सेस नेपालकोमा भिड्दै १७ प्रतिस्पर्धी
काठमाडौं साउन, ११– किशोरीहरुका लागि आयोजना हुँदै आएको ‘टिन प्रिन्सेस नेपाल’को अन्तिम प्रतिस्पर्धामा यसपटक १७ किशोरी भिड्ने भएका छन् । ¥याम्प जोन इन्टरट्रेनमेन्ट प्रालिद्धारा आयोजित यो प्रतियोगीताको अन्तिम प्रतिस्पर्धीको रुपमा पुजा तामाङ, सुनैना चौधरी, सृष्टी पोखरेल, सुम्निमा कार्की, रेनु सेन्चुरी, अर्पणा खतिवडा, पर्सिस राई, प्रिया खड्का, दिक्षा...
रेखाको ‘रुद्रप्रिया’ काे पहिलाे लुक
काठमाडौं साउन,९ । अभिनेतृ रेखा थापाको नयाँ फिल्म ‘रुद्रप्रिया’ को फस्र्ट लुक सार्वजनिक भएको छ । आम नेपाली फिल्मको लुकभन्दा फरक देखिएको ‘रुद्रप्रिया’ कार्तिक २ गते लक्ष्मीपूजाको अवसर पारेर दर्शक माझ ल्याउने तयारी गर्दै छिन रेखाले । ‘रुद्रप्रिया’ को सुटिङ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ८ वर्षदेखि बन्द भएको रेखा थापा र आर्यन सिग्देलसँगको सम्बन्ध ‘रुद्र...
साउन ७ ‘बाहुबली–टु’ मा कुमार वर्माको भूमिका निर्वाह गर्ने साउथ इन्डियन नायक पी सुब्बराजू ड्रग र्याकेटमा फसेको खबर सार्वजनिक भएको छ । केही दिन अघिमात्र पी सब्बूराजविरुद्ध नोटिस जारी गरिएको थियो । उनी ड्रग र्याकेटको मामलामा विशेष जाँच टीम एसआईटीसामू पेश भएको बताइएको छ । लागुऔषध कारोबारमा सुब्बराजूका अलावा रवि तेजा, नवदीप, तरुण र नन्दूजस्ता नायक, ...
गायक बद्री पंगेनी पक्राउ
काठमाडाैं साउन,४ । चर्चित लोकगायक बद्री पंगेनीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनी छुट्ने प्रक्रियामा छन् । महाराजगञ्ज प्रहरीले मंगलबार राति बाँसबारीमा जुवाखालमा छापा मार्दा पंगेनी पनि पक्राउ परेका थिए । त्यहाँबाट ११ जना पक्राउ गरेका थिए र २ लाख समेत बरामद भएको थियो । तर, पंगेनी कलाकार समेत भएको भन्दै प्रहरीले केही बताउन चाहेको छैन । स्रोतका...
दीपिका दुब्लाएर झिरिप्प, फ्यानले मजाक उडाए !
साउन,१। बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको एउटा तस्वीर अहिले चर्चित बनेको छ । यो तस्वीरमा उनी महिनौं खाना नखाएझैं अति दुब्ली देखिएकी छिन् । यो तस्वीर दीपिका आफैंले इन्स्टाग्राममा हालेकी हुन् । यो श्यामश्वेत तस्वीरका कारण उनलाई व्यापकरुपमा ट्रोल गरिएको छ । एक युजरले लेखेका छन्, ‘खाना खान्नौ कि क्याहो ? पुरै सुकेको रुख झैं देखिएकी छौ ।’ कत...
असार २९, गंगनम स्टाइलको जादू अब फिक्का भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षदेखि युट्युबमा शीर्ष स्थानमा रहेको यो गीतको रेकर्ड तोडेर एउटा नयाँ गीत युट्युब किंग बनेको छ । दक्षिण केरियाली गायक साईको गंगनम स्टाइलको रेकर्ड विज खलिफा र चार्ली पथको गीत ‘सी यू अगेन’ ले तोडेको छ । युट्युबमा यो गीतलाई अहिलेसम्म २ अर्ब ९० करोडले हेरिसकेका छन् । जबकी साईको ग...
असार २९,। शाहरुख खान, माधुरी दिक्षित र ऐश्वर्या राय बच्चनको चर्चित फिल्म देवदास रिलिज भएको १५ वर्ष भइसकेको छ । यसको गीत डोला रे डोला निकै चर्चित रह्यो र यसको छायांकन पनि निकै रुचाइयो । यसका लागि फिल्मका निर्देशक संजय लिला भंसालीले भव्य सेट लगाएका थिए । यो गीतलाई हिन्दी सिनेमाको सबैभन्दा महँगो गीतमध्येको एक मानिन्छ । फिल्मकी कोरियोग्राफर...
बलिउड स्टार : कसले कति पारिश्रमिक लिन्छन् ?
असार ।बलिउडका स्टारहरू एउटा फिल्ममा अभिनय गरेबापत पारिश्रमिक कति लिन्छन् होला ? यो कुतुहलता आमदर्शकमा छ । फिल्म हिट भयो भने हिरो, हिरोइनले पारिश्रमिक बढाइहाल्छन् । तर, फ्लप भयो भनेचाहिँ घटाउँदैनन् । केही यस्ता कलाकार पनि छन्, जो ठूलो ब्यानर, हिट निर्देशकको फिल्म छ भने कम पारिश्रमिकमा पनि अभिनय गर्छन् । तर, नयाँ निर्देशक, नयाँ ब्यानर छ भने चले...
सुशिल र बर्षाको ‘कारखाना’ रिलिज
असार १६ आज शुक्रबारबाट चलचित्र ‘कारखाना’ रिलिज भएको छ । अमरदिप सापकोटाको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रले सरोगेसीको कथालाई उठान गरेको छ । ‘मायाले बोलेको बोली मिठो भो’ गीतका कारण पनि यो चलचित्र चर्चामा छ । नयाँ कथावस्तु र प्रस्तुतीका कारण पनि यो चलचित्र चल्नु पर्ने दाबी यसका निर्देशक सापकोटा गर्छन् । चलचित्रमा सुशिल श्रेष्ठ र बर्षा सिवा...
केन्द्रीय कारागारमा हाँस्य कलाकार महजोडी
काठमाडौं असार १३ –हाँस्य कलाकार मह जोडी अर्थात मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश केन्द्रिय कारागार पुगेका छन् । केन्द्रिय कारागारमा रहेका १५ बन्दी महिलाले लिएको भेलवेटको जुत्ता चप्पल निर्माणसम्बन्धी एक महिना लामो सिपमुलक तालिमको प्रमाण पत्र दिन महजोडी कारागार पुगेका हुन् । जेसीआई काठमाडौं लेडी नेपालले लायन्स क्लव र सुस्तमनस्थिति कल्याण संस्थानको सह...
यो रोगका कारण आत्महत्या गर्न चाहन्थे सलमान खान
असार १२, अभिनेता सलमान खानले फिल्म ट्युबलाइटको प्रोमोशन कार्यक्रमका बेला आफूलाई ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया नामक खतरनाक स्नायूसम्बन्धि रोग भएको बताएका छन् । यो रोग यति खतरनाक छ कि यसलाई ‘सूसाइडल डिजिज’ पनि भनिन्छ । यो रोगले ग्रस्त मानिसहरु आत्महत्या गर्नेबारे सोच्न थाल्ने बताइएको छ । सलमानका अनुसार यस्ता रोग लागेका मानिसहरुले पीडाका कारण आत्महत्या ग...
छक्का पंजा २ को टिजर बाहिरियो
असार १० । दर्शकहरु माझ निकै प्रतिक्षित बनेको चलचित्र छक्का पंजा २ को टिजर सार्वजनिक भएको छ ।दीपाश्री निरौलाको निर्देशनमा बनेको चलचित्रको टिजरमा दिपकराज गिरी तथा बुद्धि तामाङको संवाद सुन्न सकिन्छ्। टिजरमा बुद्धिले साईली गितको कारण गाउँमा रमाउन नपाएको बताएपछि राजा बनेका दिपकले भनेका छन् त्यो चालिस कटेपछी रमाउन्या हो, त्यो अघि त मैले घुमाउन्या ...
एक रातमा उडाए ८२ करोड, किम कार्दासियनसँग रात बिताउन १ अर्बको अफरः साउदीका नयाँ युवराजाधिराज
असार ८ । साउदी अरबका राजा सलमानले युवराजाधिराज र आफ्ना भतिजो मोहम्मद बिन नायेफ (५७) लाई उनको पदबाट हटाएका छन् । राजाले उनको सट्टा आफ्ना ३१ वर्षीय छोरा मोहम्मद बिन सलमानलाई देशका नयाँ युवराजाधिराज घोषणा गरेका छन् । युवराजाधिराजलाई यससँगै देशका प्रधानमन्त्री पनि बनाइएको छ । योभन्दा अघि उनले उप–प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको पद सम्हालेका थिए । ...
रोबोट वा खेलौना होइन, यी हुन् वास्तविक महिला मोडल
एजेन्सी: पुतली जस्तो देखिने यी महिलाले मेकअपमार्फत यस्तो रुप पाएकी होइनन् । उनी वास्तविक रुपमा यस्तै छिन् । उनी हुन् अमेरिकाकी चर्चित मोडल मेलनी गेडोस । २८ वर्षीया गेडोस एक्टोडर्मल डिस्प्लेशिया नामक एक दुर्लभ अनुवांसिक विकारका कारण यस्ती छिन् । उनको न त कपाल छ न नै नङ । यो रोगका कारण उनको कपाल, दाँत, नङ, हड्डी, छाला र ग्रन्थीको विकासमा नराम्र...